The ibu bụghị nke gị | Apg29
The ibu bụghị nke gị
O doro anya na ọma niile chọpụtara na-atụ egwu, na-atụ egwu bụ otu n'ime anyị hardest na ndị iro?
Ihe ọ bụla na-akpali anyị na-atụ egwu enweghị ike aha ya bụ ma ọtụtụ mgbe ọrịa na-ahụ ike, na-enweghị ọrụ na otú bụghị ike ịzụta anyị ihe oriri, uwe, na enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ nke dị n'elu-atụ egwu.
sie ike iro
A ọrụ ugbo wee si na nkume igwe nri na a nnukwu arọ nchupu na ya azụ. A ịnyịnya wee na-akwọ nyere ndị ọrụ ugbo na-aga. Onye ọrụ ubi nọdụ ala na-akpa na ya azụ obi ụtọ ọ na-aga. Ọkwọ ụgbọala na-ajụ:
"Gịnị mere na ị na-nchupu?"
"Ọ ga-adị mma maka möcke ma m, na akpa ga-aga," zara ndị ọrụ ugbo.
Anyị na-eme otú ahụ mgbe Chineke na-enye ya aka.
Anyị na-adịghị aghọta mgbe nile na na e nwere egwu na-atụ egwu na-eme ka anyị na-eme ihe ọjọọ.
Anyị nwere ike na-eche na ọ dị nnọọ ka ị na-aghọta na-eme n'ọdịnihu nnọchi nwere ike na-eche mgbe ndị ngwọrọ akasiakde azụ na agụụ agwọ hypnotizes ya tara tupu ya bụ ofu. Ya mere, anyị ọsọ anya mfe ma ọ bụ dina anyị ewepụghị na-eme ihe anyị na-ekwesịghị ime na-enye onwe anyị ọzọ nsogbu.
Ihe ọ bụla na-akpali anyị na-atụ egwu enweghị ike aha ya bụ ma ọtụtụ mgbe ọrịa na-ahụ ike, na-enweghị ọrụ na otú bụghị ike ịzụta anyị ihe oriri, uwe, na enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ nke dị n'elu-atụ egwu. N'ihi ya na-enweghị ego. I nwere ike ịchụ pụọ ọtụtụ egwu nke ego ma ọ bụ a na-arị elu nche dị ka mfe ịfụ pụọ na nwetụrụ nnupu nke ịdị adị.
Egwu bụghị a hụrụ ya n'anya, ọ bụghị na-mma, nke ịnọ nanị ukwuu karịa mgbe. Ndị nne na nna na-atụ egwu maka ọdịnihu nke ụmụ ha. Children ndụ na-atụ egwu na-aga akwụkwọ. Iji ihu aghotagh na ịbụ ike emegbu. Kpomkwem n'ihi na Jizọs maara banyere ihe a nile, ọ na-ekwu na anyị na anyị ekwesịghị iche banyere ihe oriri, uwe, ma ọ bụ ndụ anyị.
Ọ dịghị onye pụrụ ijere nna ukwu abụọ n'otu oge. (Luke 6:24) ga-mere họrọ n'akụkụ? Ee, Jesus anam ẹfiọk. Ọ bụrụ na ị na-agbalị na-eje ozi abụọ n'otu oge, ọ ga-nsooyi onye "onyeisi" na ịhụnanya ndị ọzọ. N'ihi ya, ọ dịghị n'etiti ala. Gịnị ka ọ bụ na ụjọ na-atụ egwu na-eme? N'ebe a, Jizọs na-enye a kristal doro anya nkọwa.
"I nwere ike adịghị ejere Chineke ozi na aku. (= Ego na ihe onwunwe), echegbula banyere ndụ gị, ihe ị ga-eri ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ unu, ihe ị ga-eyiwe gị. "
Ọ na-echeta na nnụnụ gbasaghị adị. Chineke na-elekọta anyị na mgbe anyị na-ekwe ka ya na-Chineke anyị na anyị ga-egosi na ọ bụ Nna anyị. "Nna unu maara na niile dị unu mkpa a, na mbụ na-achọ alaeze Ya na ezi omume ya (ebe a na-abịa nkwa) na ị ga-niile fọdụrụ. Tinye gị pụrụ iche "nchupu" na "ibu" na-aga na nkwa Chineke kwere na-elekọta gị na-eme ka gị na egwu.
The kacha mma ọgwụgwọ maka egwu
Paul kacha mma na-agwọ n'ihi egwu ọ na-enye anyị mgbe ọ na-agwa otú o abụwo ma a na agụụ na-agụ biri nke ọma, a kụrụ, nwere nchegbu, mgbe ụfọdụ, a zụlitere na mbara igwe, hụrụ n'anya na-akpọ asị ma dị ndụ ọnwụ egwu. Ọ niile na-agba anyị na-mgbe-enwe obi ụtọ na-ekele Chineke na ihe niile nke ndụ ọnọdụ.
Iji ekele Chineke na ọ bụ uche Chineke na Kraịst Jizọs. Ọ scares egwu ọsọ na-enye anyị enyemaka ị na-ahọrọ nri nna ukwu nke ndụ anyị mgbe egwu tent "ụkwụ na ụzọ" na ọjọọ agbalị ka ekwe.
V 04, tisdag 26 januari 2021 kl 04:41